HEERKULKA KAYDINTA EE DABACASAHA XILLIGA QABOOBAHA: MA SUURTAGAL IN LA BARAFOOBO KHUDRADDA, GAAR AHAAN DHISMAHA XIDIDKA, IYO SIDOO KALE FARAQA U DHEXEEYA NOOCYO - KHUDRADDA
Heerkulka lagama maarmaanka ah ee kaydinta dabacasaha: muhiimada shahaadooyinka, farqiga u dhexeeya noocyada kala duwan iyo waxyaabo kale
Carrot waa dalag khudradda ka mid ah oo ka mid ah kuwa ugu yar ee ku habboon kaydinta muddada dheer. Si aad tan u sameyso, waxaad codsan kartaa hababka kala duwan, doorashada taas oo lagu go'aamiyey rabitaanka shakhsiyeed ee xagaaga deggan, dhismaha la heli karo iyo noocyada kala duwan ee dalagga.
Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la abuuro shuruudo buuxa oo loogu talagalay ilaalinta soo bandhigida dabacasaha, oo ay ka mid tahay habka heerkulka saxda ah waa muhiim. Aan ka hadalno arrintan si faahfaahsan ee maqaalkeena. Sidoo kale fiirso fiidiyowga macluumaadka mawduucan.
Isku xirnaanta qaabdhiska qudaarta
Karootada waa noocyo kala duwan oo dalagyo ah oo loo isticmaali karo iibka cusub, kaydinta iyo wax soo saarka. Sababtaa tan, karootada waxaa loo saari karaa xididka caalamiga ah. Noocyo dabacsan iyo Beelaha dabacasaha waxaa lagula talinayaa kaydinta.. Waa muhiim in ay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
qaabka saxda ah ee khudaarta;
DAREEN: Tan iyo dabacasaha miiska waxay leeyihiin tayada ilaalinta hooseeya, qeyb ka mid ah goosashada ayaa laga yaabaa in lumo. Laakiin waa ku filan in la ilaaliyo heerkulka saxda ah iyo qoyaanka si loo kordhiyo nolosha shelf ilaa 4-8 bilood.
Noocyada ku xiran kaydinta muddada dheer
Si aad u kaydiso karootada laguma talinayo in aad doorato noocyo hore. Inkasta oo qaanuunkani aanu had iyo jeer shaqaynayn, tayada ilaalinta dalagga waxay ku xiran tahay maaha oo keliya noocyada kala duwan, laakiin sidoo kale xaaladaha kaydinta, diyaarinta saxda ah iyo ururinta waqtigeeda. Tusaale ahaan, haddii xagaaga uusan aheyn mid dheer, markaa noocyada dambe ee qaan-gaaban ma haystaan ​​wakhti ay ku uruuriyaan qaddarka loo baahan yahay ee sonkorta iyo fiber, sidaas darteed, tayada hayntu way yar tahay.
Kaydinta muddada-dheer waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo noocyada soo socda:
Jiilaalka Moscow. Tani waa noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah oo xilli-dhexaad ah oo leh tayada ilaalinta 12 bilood.
Shantane. Kala duwanaantu waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku koraan xididada macaan, oo leh caraf cad. Waa xilli-dhexaad, waxaa lagu kaydin karaa ilaa 10 bilood.
Nantes. Taaban karo tan Bisaylkiisa hore. Dalagyada rootiga waxaa lagu keydin karaa 7-10 bilood.
Miyuu suurtagal yahay?
Karootada waa khudradda oo u fiican in lagu kaydiyo jiilaalka. Ma jiraan talooyin gaar ah oo habka loo kaydiyo. Tusaale ahaan, haddii karootada tayo sare leh, wax khasaare ah kama gaarto dalagyada xididka, ka dibna waxaad dooran kartaa hababka kaydinta ee soo socda ee miiska ama qolka diiran:
bacaha balaastigga ah;
Haddii ka dib markii diidmo dalagga dalaggu uu haleesho xididada. Si aad u kaydiso, waxaad isticmaali kartaa hababka soo socda:
MUHIIM: Mid kasta oo ka mid ah hababkani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku kaydiso khudradda cagaaran ee loo diyaariyey waqti dheer. Xaaladdan oo kale, dhammaan sifooyinka nafaqada ah ee dabacasaha waa la ilaaliyaa, in kastoo tani ay u baahan tahay kharashka shaqaale ee waaweyn iyo helitaanka boos dheeraad ah ee aqalka.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira tiro shuruudo ah, taas oo ay jirto fursad ay ku kordhiso kaydinta walxo cusub ilaa guga xiga:
xulashada noocyo of khudradda xididka;
la'aanta oksijiinta xad-dhaafka ah;
Weli muhiim ah iyo waafaqsanaanta nidaamka qoyaanka ee meelaha kaydka ee dabacasaha. Waa inay la mid noqotaa 90-95%. Haddii tirooyinkani ay yaryihiin, markaa tani waxay horseedi doontaa dillaacida dalagyada xididka, iyo kuwa sare - si loo yareeyo.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato siyaabo kale oo lagu keydiyo dabacasaha guriga iyo beerta:
Sida loo badbaadiyo haddii aysan jirin maqnaansho
Bangiyada iyo sanduuqyada.
Hababka kaydinta iyo teknoolajiyada ilaalinta.
Miyuu suurtagal yahay in la jaro jalaato?
Waxaa sidoo kale muhiim ah in la ogaado sida loo jaro dabacasaha xilliga jiilaalka.
Fiiri fiidiyaha ku saabsan sida loo keydiyo dabacasaha xilliga qaboobaha:
Muhiimada shahaadooyinka saxda ah
Marka kaydinta dalagga, waa muhiim in la ilaaliyo heerkulka ku haboon. Haddii heerkulku ka sarreeyo 5 darajo Celsius, tani waxay u oggolaan doontaa koritaanka kelyaha aan la saarin. Haddii heerkulku ka hooseeyo 0 darajo, markaa dheef-shiid kiimikaadka hooseeya, oo ay weheliyaan dhowr geedi socod oo ka mid ah geedi socodka biyaha, ayaa hoos u dhigi doona ilaa 10 jeer.
Habka kaydka Root
Habka kaydinta ee dalagyada xididka ee dukaamada khudradda ayaa loo qaybiyaa 4 jeer, mid kasta oo ka mid ah taas oo lagu garto heerkulkiisa:
Caafimaadka Muddada waxay socotaa 8-12 maalmood waxayna bilaabmaysaa isla markiiba ka dib marka la goosanayo khudradda. Waxay ku dhacdaa nidaamka heerkulka oo uu soo saaray xilligii goosashada 10-14 digrii iyo qiyaasta qiyaastii 90-95%. Waqtigaan, helitaanka bilaashka ah ee ogsajiinta khudaarta waa muhiim. Qeybta ugu hooseysa ayaa ah in dabacasaha uu jiidi karo dhaawaca farsamooyinka ah ee la heley xilligii goosashada.
Qaboojinta. Kadib dhammaadka muddada daaweynta, khudaarta waa in la qaboojiyaa heerkulka xilliga keydinta. Muddada qaboojinta waxay noqon doontaa 10-15 maalmood. Heerka qaboojinta ee dalagyada xididku waa 0.5-1 digrii maalintii. Habka qaboojinta tartiib tartiib ah ee khudaarta waxaa loo isticmaalaa qiyaasta warshadaha. Xaaladaha qarsoon waxaa ka mid ah caawimaadda hawo-firfircoonida.
Ugu weyn. Tani dhab ahaantii waa kaydinta khudaarta illaa guga. Mudada waa 6-7 bilood. Xakamaynta heerkulka waxaa lagu hayaa gobolka 0-1 digrii oo qoyaan ah 90-95%.
Guga. Guga, karootada waa la keydiyaa ilaa laga iibiyo ama la wada baabbi'iyo. Haddii ay suurtagal tahay, heerkulku waa inuu ahaado sida waqtiga ugu muhiimsan 0-1 heerka Celsius. Haddii aysan suurtagal ahayn in lagu sii wado heerkan, karootada waxaa lagu rakibay qaboojiyaha.
Tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee qaabka ilaalinta dalagga - heerkulka iyo qoyaanka qaraabada. Waa lagama maarmaan in la xakameeyo dhammaan tilmaamayaasha inta lagu jiro waqtiga kaydinta. Xilliga dayrta iyo jiilaalka, tilmaamayaasha kulka waa in la go'aamiyaa maalin kasta, iyo jiilaalka, 1-2 jeer toddobaadkii. Dhamaan xogta waxaa lagu diiwaangeliyaa qoraalo gaar ah. Heerkulbeegyada, heerkul-kulaylka iyo fareemka ayaa loo isticmaalaa si loo cabbiro heerkulka daboolka.
Si loo abuuro shuruudo heerkul ah heerkulka tayada ilaalinta wanaagsan ee dabacasaha, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo talooyinka soo socda:
dukaanka dukaanka laga soo gado khudaarta alwaax ama sanduuq balaastik ah;
ha ku ridin weelka dabaqa dhulka hoostiisa ama garaashka, laakin ujeedadaas ujeeddo ujeeddo u isticmaal 10-4 cm dhulka;
qolalka kaydka ee la doorto waa inaysan barafoobin;
haddii heerkulku aad u hooseeyo, ka dibna rakibo kuleyliyaha.
Kaydinta dabacasaha ma ahan hab fudud oo hawleedka lagu riixo.. Ma aha ku filan in la diyaariyo oo lagu daboolo karootada ku jirta weel. Waa lagama maarmaan inta lagu jiro dhammaan muddada ilaalinta si loo kormeero nidaamka heerkulka. Haddii wax walba loo ogolaado in ay ka baxaan, xididdadu waxay bilaabi doonaan inay sii xumaadaan oo ayna awoodi doonin inay ilaaliyaan bandhigga illaa guga.
Sidee shinni malab u shaqeynayaa?
Sida loo aaso basasha jiilaalka
Waxaad ku farxi doontaa dhadhanka jilicsan, midhaha jilicsan ee miro - Royal Penguin Tomato: sharaxaad kala duwan
Digaagga ku beeray Pharma
Delicious, aan qabyo ahayn, noocyo qurux badan oo yaanyo ah "Chocolate"
Beeridda iyo daryeellka Casaanka ah ee Roses (Zeanotus)